Keepnọgide Na-enwe Meannọgide Na-aga Meanlọ? | Martech Zone
Ndi Ndika Iso Ndu ke Ufọk?
Thursday, May 31, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Egwú masiri m, ma agabeghị m ebe a na-egwu egwu kemgbe ọtụtụ afọ.
Enwere m mmasị n'egwuregwu, mana agbabeghị m ọtụtụ afọ (na girth m na-amalite igosi ya).
Enwere m ezigbo nri, mana m na-eri ahihia.
M hụrụ ihe nkiri n'anya, mana ahụbeghị ngosi ebe m bi na Denver.
Enwere m mmasị ịpụ biya, ma naanị m gara ugboro ole na ole n'afọ gara aga.
Enwere m mmasị na fim, mana anaghị aga.
M asị emega ahụ, otú ahụ ka m na-arụ ọrụ na-abụghị nkwụsị kama. Ọ na-egosi!
Ahụ Ike m
Mgbe ya na di na nwunye na-azụ ahịa nọ n’obodo ahụ, otu onye n’ime ha kwuru banyere otú ume ọ ga-esi malite n’ụbọchị - ọ na-eteta ụra n’oge na ịnyịnya ígwè 20+. M na-agba ịnyịnya ọtụtụ ... M hụrụ n'anya ịnyịnya ígwè (ọ bụ ezie na ejighị m n'aka La-Z-Boy na-eme oche igwe kwụ otu ebe). Anyị kwara njakịrị na anyị chọrọ ụzọ iji wulite kọmpụta na pedal. Chọpụta ihe, enwere ihe yiri ya! Tony Little dị n’elu ya na PC Gamer Bike! Nke ahụ abụghị azịza ya n'ezie, agbanyeghị, ọ bụ? Weta mmega ahụ m n'ọrụ m maka na ọrụ m na-eri ndụ m niile? Echeghị m.
Emechaa taa, mụ na ya na-akparịta ụka Julie na Julie bidoro ikwuputa ebe nile di egwu maka egwu, nka, na egwuri egwu. M na-abịa na 5 afọ na Indianapolis na m bụ ihere na m enwetụbeghị ahụmahụ ọ bụla nke nnukwu ihe o nwere. Ka Julie gbadara ndepụta… Yat si, White River State Park, Eagle Creek, The Verizon Ampitheatre, na Eiteljorg Museum, The Indianapolis Zoo, The Indiana State Museum, na a ton ọzọ… M agabeghị ọ bụla. Agara m ebe ụmụaka na-eme ihe nkiri, ụfọdụ egwuregwu bọọlụ AAA Indian, egwuregwu di na nwunye Pacers na egwuregwu di na nwunye Colts… mana ọ bụ ya.
N’ozi m iwulite ọmarịcha blọọgụ ma bụrụ ọkaibe na teknụzụ, elegharala m ihe ndị m kacha hụ n’anya anya! Ruo afọ 5 ugbu a, enyela m ndị ọrụ m ụbọchị m, ehihie na abalị na ngwụsị izu - ma na-arụ ọrụ na blọọgụ m n'etiti. Ọ dịghị ụbọchị na-aga na enwere m onye ọrụ ma ọ bụ na netwọkụ m na-achọ m enyemaka, ọ masịrị m inye ya. Ọ fọrọ nke nta ka m ghara ịsị mba. Ka m na-ede akwụkwọ a, enyere m otu enyi m nwoke na-eto eto aka ịtọlite ​​MySQL nchekwa data na sistemụ ya XAMPP. M na-atụ anya inyere ya aka karịa na ọbịbịa afọ - ọ rịọrọ m ka m bụrụ onye ndụmọdụ ya maka nnukwu ọrụ ya na-emepe ngwa weebụ.
Emeela m ka ndị niile gbara m gburugburu mara na ọ bụ ya mere m ji nọrọ ebe a na ọ bụ ihe m dị mma. Obere oge ka ihe a mere ebe m chere na a na-eji m. Ọ ga-abụ oke nsogbu ịgbanwe ndị mmadụ na-atụ anya m. Achọrọ m ịga n'ihu na-enyere aka ebe ọ dị mkpa, mana ọ bụghị n'iji ndụ m.
Mgbe m na-anọghị na San Jose otu afọ gara aga, enwere m obi ụtọ na otu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ si arụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N’abalị ọ bụla, a na-ezukọ n’obodo niile. M gere ntị ka ndị mmadụ na-ekwu maka ebe ha hapụrụ, ma ọ bụ kelee onye ha hụrụ na di na nwunye izu ole na ole gara aga na mmemme ọzọ. Ọtụtụ ndị folks gara ebe ngosi, ụlọ nri, ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ ọnụ. Indianapolis, dịka m maara, enweghị 'ndụ abalị' teknụzụ. Amaara m na anyị nwere ndị ọrụ SQL, .NET na Flex ebe a na mpaghara mana ndị a bụ yawnathons. Otu ìgwè ndị na-anọdụ ala n'ime ụlọ na-ekiri ihe ọjọọ Powerpoint (Abụ m otu n'ime ụmụ okorobịa ahụ… Anọ m na-eme ka m nwee ike ịbanye na Blogging power last izu abụọ gara aga) achọghị m.
Kacha nso m ga-enwe mkpali bụ ịga otu obodo Indianapolis Book Club. Ihe nzuzu dị nsọ, aghaghị m afọ iri asatọ! Isi ihe m na ịkparịta ụka n'socialntanet (n'ezie, ọ bụghị nke mebere) bụ freakin 'Book Club? Ezigbo ndị enyi m Bill na Carla na-akwadebe maka njem ụgbọ mmiri na Europe, m na-anwa ịchọta ụfọdụ ịgụ akwụkwọ. “Towa ka Doug… nke a na-adịghị arụ ọrụ!”.
Ndi be anyi aju aju kam si na aka oru m dika m si eme. Ọfọn? Echere m na ọ na-apụtawanye ìhè otu m si emezu nke ahụ, ọ bụghị ya? Ana m eleghara ihe ọ bụla ọzọ ná ndụ m anya. Enwere m ike ịnwe ọfịs na Aniak, Alaska, ma bie ndụ dị ka o siri ike. Yabụ - lee ajụjụ nde dollar:
Keepingdebe ihe pụtara ị nọrọ n'ụlọ?
Ewerela nke a dị ka post 'dara ogbenye' - ọ bụ ihe megidere ya. M na-esetịpụrụ onwe m na blọọgụ m ihe ịga nke ọma ma nweta ha. Amachaghị m na m setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ kachasị mma! Oge eruola maka mgbanwe ụfọdụ.
Enwere m ike ijide onwe m ma ghara ịnọ n'ụlọ. Aga m amalite ịrụ ọrụ na nke ahụ ozugbo. Anaghị akwụ m ụgwọ maka abalị na ngwụsị izu ka m wee chee na ọ bụ oge m ga-akwụsị inye ha n'efu. Enweghị email, ọ dịghị akwụkwọ ọzọ. Aga m na-egosi! Aga m na-agba ịnyịnya ígwè m (anyịnya) n'ụtụtụ. Na echi m ga-ahapụ ọrụ n'isi ụtụtụ gaa mụ na nwa m nwanyị oge ụfọdụ! Na… ma eleghị anya, otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ dị nso.
Ekelere Julie maka echiche maka post a !!!
Teknụzụ Microsoft Photosynth
28% nke ndị isi ụlọ akwụkwọ sekọndrị chere na Ọrụ Worklọ Akwụkwọ bụ…
Mee 31, 2007 na 11: 01 PM
Daalụ ọzọ maka enyemaka niile ị nyere m. Ọ na-ekele nke ukwuu. Echere m na m nwere ọchioma ịchọta onye nọ na mpaghara m nwere ike inye nghọta dị ka ị na-eme.
M na-atụ anya na-esote afọ dị ka nke ọma; ọ bụ ezie, na ndepụta nke ọrụ ndị anaghị anabata maka nnukwu ọrụ na-esote afọ na-eme weebụsaịtị. Ekwenyeghi m na 100% ma ọ bụrụ na nke a ga-agụnye ihe m na-eme atụmatụ ime, mana enwere m olileanya na ọ bụghị.
N'ikpeazụ, ekele maka ịbụ onye ntinye aka raara onwe ya nye. Dị ka ị maara, m na-agụ blọgụ gị kwa ụbọchị, ọ ghọwokwa isi ihe m na-eduzi.
Mee 31, 2007 na 11: 20 PM
A bụ nnukwu nwa akwụkwọ. Enwere m mmasị na mbọ ị na-agba tupu ịkpọtụrụ m… ọ na-egosi ọtụtụ ụzọ.
Anyi wee nabata! Ana m atụ anya ịhụ ihe ị bịara. Know mara, ezutere m nwatakịrị ahụ mepụtara Omume ọ bụkwa ọgbọ gị. Obi abụọ adịghị ya na ị ga - agarịrị ike m n'oge na - adịghị anya!
Mee 31, 2007 na 11: 31 PM
Nke ahụ ga-adị mma n'echiche nke imeziwanye onwe m, mana mgbe ahụ, agaghị m enwe onye ọ bụla gakwuru maka enyemaka. Batman. Ọ bụrụhaala na ị nọ mgbe niile maka echiche nke abụọ.
Mee 31, 2007 na 10: 05 PM
Anọla m ebe a maka ezigbo nkeji 10-15 na-ewere ihe niile ị dere. Nwoke, nke a bu ihe di omimi ma juputara n'eziokwu ma na-akpali ya n'ime nwoke n'azu blog.
M a otutu dị ka gị Doug site n'itinye ihe fọrọ nke nta ka m niile na-amụ anya oge nakwa dị ka otu anya oghe oge n'ime ọrụ na oru ngo.
Ihe m mutara n’oge gara aga bu ihe ikwuru ebe a n’ozi gi. Geeks dị ka anyị kwesịrị ibili ma pụọ ​​na kọmputa obere oge.
Ugbu a, anaghị m ekwu na m na-agba ịnyịnya ígwè ịgba ịnyịnya 20 kilomita dị ka enyi gị mana m na-anwa ma pụọ ​​na kọmputa ugboro ole na ole n'ụbọchị iji gaa obere ije. Ọ na - enyere aka ịgbatị ụkwụ na azụ m yana ọ na - enweta ọbara na - aga.
Ana m akwado gị ka ị nwaa otu ihe ahụ, ọbụlagodi na ọ bụ obere ije n'okporo ámá na azụ. Obere ntakịrị na-enyere aka.
Banyere ndụ onwe gị, nke ahụ dị mma banyere otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ ịnọ na mbara igwe, hụ na ọ bụrụ na ọ bụghị geek na m na-ekwu na n'ụzọ kachasị mma, hapụ PocketPC n'ụlọ ma ọ bụ gbanyụọ ọkwa.
Nye ụbọchị gị nlebara anya zuru oke nke ị ga-etinye n'ọrụ ntinye ego.
Ọdịnihu gị yiri ka Doug dị mma. Anyị niile ga-agabiga nsogbu na ndụ na ọrụ. Ọ na-ewuli agwa na nwa nwoke anyị nwere ụfọdụ nke ahụ 🙂
Jisie na ndụ, ịhụnanya na ọrụ. Echere m na site n'obi Doug.
Obi dị m ụtọ na anyị abụrụla enyi, n'agbanyeghị nsogbu na nsogbu, ihe anaghị egbu anyị na-eme ka anyị sie ike…
Mee 31, 2007 na 10: 11 PM
Ihe ọma niile dị mma. Nuff kwuru.
E wedakwara m ala na m tinyere a inụ n'ime ọkpọ gị ka ịpụ ma nwee obi ụtọ. E nwere ọtụtụ ihe dị ukwuu banyere Indy! Ndị bi n’obodo a dị egwu ma ụwa anyị ga-adị mma ma ọ bụrụ na anyị niile nwere obi ụtọ karịa gburugburu gị. Nginggbanwe ụwa na-amalite site na ịgbanwe ụwa gị.
Mee 31, 2007 na 10: 20 PM
@Julie: Amaghị m na Doug na-efe ọfụma 🙂
Daalụ maka inyere Doug aka ịkwalite onwe ya. Nke ahụ dị egwu.
Ekwenyere m na 100%, ihe ọma niile dị mma.
Ugbu a, ọ bụrụ na anyị nwere ike nweta ihe osise nke Doug na-eyi bonnet, ụbọchị m ga-ezu… hehe.
Mee 31, 2007 na 11: 02 PM
LOL. Aga m arụ ọrụ na eserese ahụ. Ekwenyesiri m ike na ụfọdụ ndị enyi m na-ese ihe na-agba agba Photoshop nwere ike inyere m aka ma ọ bụrụ na DK agaghị adị njikere. Ugbu a, M nnọọ ghọtara na site na "anu ke boneeti" nkebi ahịrịokwu m kpamkpam ka pusi si akpa na m a mba gal ese dị ka a girl girl a mma ebe.
Mee 31, 2007 na 11: 21 PM
Eserese m na bonnets bibiri ogologo oge gara aga, tupu ụbọchị weebụ.
Mee 31, 2007 na 11: 05 PM
Mara mma Doug …… ma biko gbaa mbọ hụ na ị nọpụrụ Treadputer 🙂
Mee 31, 2007 na 11: 23 PM
Cycleputer putara anyi nwere ike ikwu okwu! Enwere otu nwoke nọ n’ime obodo a nke nwere ebe ngosi nwere ihe ngosi 6… Ahụrụ m eserese n’akwụkwọ akụkọ ozugbo. N'ezie, ya onwe ya nwekwara injinia nke oge ya zuru ezu maka ụlọ ya.
Mee 31, 2007 na 11: 30 PM
"Eserese m, nke nwere okpu, ka ebibiri n'oge dị anya gara aga, tupu ụbọchị web."
Ya mere, echere m na m ekwesighi itinye onye nke gị azụ na oge mmiri gị mgbe ọ na-eyi ọfụma? Were tooụbigara mmanya ókè icheta mana mmadụ, ị bụ okpu 🙂
Jun 1, 2007 na 5:34 AM
Ọmarịcha ọkwa, ma ị ga-enwerịrị eziokwu. Ana m arụ ọrụ ugbu a na PhD m ma malite azụmahịa n'otu oge ahụ, ya mere, m na gị ziri ezi na a na-anwa gị ịnwa iwe otu izu n'otu oge n'ihu kọmputa m. Afọ abụọ gara aga, mụ na nwunye m (oh yeah, na m lụrụ) kpebisiri ike na anyị ga-ewepụta oge "enweghị mkparịta ụka" maka ibe anyị (anyị agabeghị ụbọchị abalị Fraịde na afọ 2), na maka mmega (m na-emega dịkarịa ala 1/2 awa kwa ụbọchị). Ndị a bụ ihe ole na ole m mere nke na-arụ ọrụ nke ọma. Ma eleghị anya, ha ga-aba uru maka onye ọ bụla nọ n'ebe ahụ na nke a:
1. m na-agbalị na-echekwa ihe ọ bụla na-agụ m ga-eme, mgbe ahụ bipụta ya ma na-agụ mgbe na anyịnya igwe kwụ otu ebe 1/2 hour. nke a na-ewetụ m ọfụma, mana a) na-eme m anya ụra mgbe m na-agụ akwụkwọ sayensị ma b) were otu okwute gbuo nnụnnụ 2 (ọrụ na mmega ahụ)
2. ọ bụrụ na m nọgidesiri ike na nsogbu nnyonye anya nke na-achọ iche echiche, m na-apụ maka ịgba ọsọ, mgbatị ahụ ọsọ ọsọ na mgbatị ahụ, ma ọ bụ egwuregwu bọọlụ basketball, ma chee echiche banyere isiokwu ahụ ka m na-aga. ọ bụ ihe ịtụnanya ihe anya ga-enweta echiche na-eche banyere ihe dị iche iche ọnọdụ, na endorphins na-agba ọsọ obere elu.
3. onye ndu m na-eduzi nzukọ njegharị, emela m ihe a oge ụfọdụ. ha dị mma maka ịgbanwe echiche.
ps ị maara na Thomas Jefferson na-akọ na ọ gosipụtara 2 awa kwa ụbọchị?
Jun 1, 2007 na 7:45 AM
Nke ahụ bụ ndụmọdụ dị egwu. Enwere m obi ụtọ n'ịtọ ihe mgbaru ọsọ na idebe ha - echere m na m ga-agbaso nke gị ebe a! All 3 ngwọta bụ ihe m nwere ike ime ozugbo… karịsịa 1 na 3. Aga m na-eje ije gburugburu n'ehihie a!
Daalụ - na nke kacha mma na PhD. Nke ahụ bụ ihe ịtụnanya rụzuru. Ana m atụ anya ịlaghachi ụlọ akwụkwọ na inweta MBA m. Amaghị m ma ọ bụrụ na PhD nọ n'ọrụ, mana m hụrụ ụlọ akwụkwọ n'anya nke ukwuu na ọ nwere ike ime. Anyị ga-ahụ ihe ọdịnihu ga-eweta!
Daalụ maka mmụọ nsọ na ndụmọdụ!
Jun 1, 2007 na 6:10 AM
Doug, Ahụrụ m gị n'anya mgbe niile ịgụ blọọgụ gị mana nke a dakwasịrị m n'ụlọ. Ọ dị m ka ị na-akọwa m ka m na-agụ ya. Echere m na ọ dị mma ịghọta na e nwere ndị ọzọ dị ka anyị si n'ebe. Daalụ maka akaụntụ obi ọjọọ banyere ndụ gị. Na ọdịmma na "ọdịnihu"!
Jun 1, 2007 na 7:38 AM
Daalụ Patric! Echeghị m na ndị folks ga - ahụ ọtụtụ mgbanwe ebe a na blọgụ… ọ ga - abụkarị ihe m na - arụ na ọrụ ahụike m na - abụghị blog. Ọ bụrụ na ọkwa a na-enyere ndị ọzọ aka ile onwe ha anya, nke ahụ bụ nnukwu ihe!
N'ezie, ụbọchị ọhụụ m bidoro site n'ịgbago mgbatị ahụ m n'ụtụtụ a ma ọ nwụọla. Echere m na enwere batrị ebe ebe ọ bụla chọrọ ịgbanwe kwa afọ abụọ couple Naanị m ga-achọta ya!
Jun 1, 2007 na 11:02 AM
Gaa maka ya! Notice hụrụ na Mike hapụrụ ịnyịnya ígwè ya na-abụghị eletriki ebe ahụ n’abalị ụnyaahụ! Anyị na-eje ije karịa n'oge na-adịbeghị anya, kwa.
Jun 1, 2007 na 1: 41 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ọtụtụ n'ime onwe gị. Echere m na ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịchọta onwe anyị n'otu ụgbọ mmiri ahụ! Mgbe mbụ m malitere blọọgụ m, ọ dabara na ya, m leghaara ndị bi m anya. Ọ dị mfe "nọrọ n'ụlọ" ma bụrụ "ejikọrọ" na kọmputa na ndị enyi ọhụụ m na-ede blọgụ (ndị m hụrụ n'anya nke ukwuu!). Ọnwa ole na ole gara aga, anọ m na-eme ụfọdụ mmemme mmekọrịta ndị ọkachamara yana yana ịkparịta ụka n'localntanet (ebe a na San Diego, ọ dị ezigbo mkpa ịme kọntaktị mpaghara!). Nke a enyela m ume ma bulie ọ bụghị naanị ọdịmma m kamakwa azụmaahịa m.
Anaghị m ede blọgụ na ngwụsị izu, ọ na - esikwara m ike, mgbe ụfọdụ anaghị m atụgharị PC m na ngwụsị izu! Itinye mgbidi n’etiti ọrụ na ndụ onwe onye dị m mkpa.
Ugbu a, Doug, pụọ ebe ahụ ma nwee ọmarịcha izu ụka! Blog gị nkume! 🙂
Jun 1, 2007 na 3: 46 PM
“Newbọchị ọhụrụ m bidoro site n’ịgba ịnyịnya ígwè m n’ụtụtụ a wee nwụọ. Echere m na enwere batrị nọ ebe ahụ nke chọrọ ịgbanwe kwa afọ ọ bụla? Achọrọ m ịchọta ya ”
Ihe ndi ozo adighi, gua ntuziaka 🙂
O nwere ike ịbụ na ebe ngosipụta bụ… ịchọ a obere ọnyà ụzọ ụdị ihe.
Ọ bụrụ na ihu igwe na-ekwe, enwere ike ịga ije na mgbede a… nke ga - eme ka ọbara gị na - aga.
Jun 1, 2007 na 4: 15 PM
Na-enwe obi ụtọ na ị naghị ebi n'akụkụ m, anyị ga-enwe beers kwa izu ma ọ bụ ikekwe karịa oge, anyị nwedịrị ike ịga mgbatị ahụ! Are bụ onye nkwukọrịta onyinye.
engtech @ internet duct teepu
Jun 1, 2007 na 4: 28 PM
Nke a bụ ihe mere m "mgbochi-agbasa-ozi ọma".
A na-agbasa ozi ọma mgbe niile, ịnwa idebe ya oge niile agaghị ekwe omume. Ilekwasị anya n’ịmụta ihe, mmepe nka, na ihe ị ga - ewepu ya na - eme ka enwekwu uche ogologo oge.
Jun 1, 2007 na 4: 43 PM
Azịza nke Blogosphere:
25 Free Health Atụmatụ maka Computer Nerds ”.
Nwee mma ike izu-ọgwụgwụ!
Jun 4, 2007 na 4: 54 PM
Ma lee a ahụike dị mma maka nzukọ ekwentị> / A>.
Jun 7, 2007 na 5:23 AM
Ma njikọ ọzọ:
Nduzi nlere anya na nri siri ike 🙂
Jun 7, 2007 na 7:12 AM
Hummus. Ọgbụ! Enweghị ndị na-ere Snickers n'ebe ahụ? 😉
Jun 7, 2007 na 7:45 AM
Lee, enyi m. Enwere azịza ị na-achọ.
Jun 2, 2007 na 3: 33 PM
6/2/07 – otu maka otu!
Jun 2, 2007 na 7: 49 PM
Agara m nkịta ahụ ogologo ije taa, mana kwenyere, m rụrụ ọrụ ụbọchị niile taa 🙁